Qoraal Nololeedka Qofeed - Daryeel Magazine
Qofkasta oo damacsan in uu is-hormariyo waxaa laga doonayaa inuu leeyahay qoraal cadeynaya waxa uu jecelyahay inuu gaaro mustaqbalka, kaas oo hagaya noloshiisa. Qoraalkaas oo uu qofku ku qorayo warqad, kuna cadeynayo waxa uu damacsan yahay mustaqbalka. Isla markaana uu dajisto hadafyada uu ku gaarayo waxa uu damacasanyahay. Hadaba, waxaan kaga hadli doonaa : Waa maxay Qoraal Nololeedka Qofeed? Muhiimadda ay u leedahay qofka? Sifadda laga rabo qoraalka, iyo sida loo qorto Qoraal nololeedka.
Waa Maxay Is-Hormarin Qofeed? Maxayse Tahay Muhiimadda Ay Leedahay? Tallaabada Koobaad ee Guusha – Hadaf! Maxay farta dhakhaatiirtu u Tahay mid Qoraakeeda aan La Fahmayn Xikmado Qaali Ah Oo Nolosha Ku Saabsan